China Non-Rebreather Oxygen Imaski ifektri kanye nabaphakeli | I-Bornsun
I-Medical disposble oxygen mask enesikhwama sedamu isetshenziselwa iziguli ezidinga inani elikhulu lomoya-mpilo, ukusebenzisa kahle i-oxygen ekugxileni okuphezulu. I-Non-Rebreather mask (NRB) isetshenziselwa iziguli ezidinga inani elikhulu lomoya-mpilo. Iziguli ezinokulimala okubuhlungu noma izifo ezihlobene nenhliziyo zifuna i-NRB. I-NRB isebenzisa idamu elikhulu eligcwalisa lapho isiguli sikhipha umoya. Umphunga uphoqelelwa ngezimbobo ezincane ohlangothini lwesifihla-buso. Le mibobo iyavaleka ngenkathi isiguli sidonsa umoya, ngaleyo ndlela kuvimbela umoya wangaphandle ukuthi ungene. Isiguli siphefumula umoya-mpilo omsulwa. Izinga lokugeleza kwe-NRB yi-10 kuya ku-15 LPM.
Isetshenziselwa ukudlulisa umoya ophefumulayo we-oxygen emaphashini eziguli. Isifihla-moya somoya-mpilo sinezintambo ezinwebeka kanye neziqeshana zekhala eziguquguqukayo ezenza ukuthi kube nokulingana okuhle ngobukhulu bobuso. I-Oxygen Mask eneTubing iza ne-tubing yokuphakela i-oxygen engu-200cm, kanti i-vinyl ecacile nethambile inikeza induduzo enkulu yesineke futhi ivumela ukuhlolwa okubukwayo. Oxygen Mask ngeTubing itholakala ngombala oluhlaza noma obala.
1.Made grade medical PVC.
Isiqeshana sekhaleni esishintshekayo siqinisekisa ukulingana okunamandla.
Ibhande le-Elastic Head lokulungiswa kweziguli
Umphetho we-4.Smooth kanye nezimpaphe wokunethezeka kwesiguli nokunciphisa amaphuzu wokucasuka
Imibala 5.Two lokuzikhethela: oluhlaza futhi esobala.
I-6.DEHP mahhala ne-100% latex etholakalayo.
7.Tubing obuphelele kungenziwa egcizelele.
Usayizi: XS, S, M, L, L3, XL
5.bag: 1000ml noma 600ml
Isitifiketi se-6.Quality: CE, ISO 13485
Zonke izinto ezisetshenziswa ekwakheni i-Oxygen Mask, kanye ne-Oxygen Tubing ayinayo i-latex, indawo ethambile futhi ebushelelezi ngaphandle komphetho obukhali nento, Azinayo imiphumela engathandeki ku-Oxygen / Imithi edlula ngaphansi kwezimo ezijwayelekile zokusetshenziswa. Imaski Izinto ziyi-hypoallergenic futhi kufanele zimelane nokushisa nokugoba okusheshayo.
1. Namathisela ishubhu lokuphakelwa komoya-mpilo kumthombo womoya-mpilo bese usetha umoya-mpilo ekugelezeni okukhona.
2.Bheka ukugeleza komoya-mpilo kuyo yonke idivayisi.
3.Beka imaski ebusweni besiguli ngentambo enwebeka ngaphansi kwezindlebe nasentanyeni.
4.Donsa ngomusa imikhawulo yebhande kuze kube yilapho imaski ivikelekile.
5.Mold umucu wensimbi kumaski ukulingana ikhala.
Uhlobo lwephakheji: 1pc / PE bag, 100pcs / ctn.
Isikhathi esiholayo: ＜Izinsuku ezingama-25
Itheku: IShanghai noma iNingbo
Indawo Yomsuka: Jiangsu China
Inzalo: EO igesi
Umbala: Transperant noma Green
Langaphambilini Ithiphu ye-Nasal Oxygen Cannula-soft
Olandelayo: Oxygen Mask